Gudoomiyihii hore ee Balcad oo ka hadlay howlgalka la doonayey in lagu soo xiro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
20th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Balcad – Mareeg.com: Gudoomiyihii xilka laga qaaday ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, islamarkaana shalay dagaal looga saaray degmada kadib markii uu amar diido sameeyey ayaa ku dooday inaan lagu soo wargelin xil ka qaadista lagu sameeyey.
Gudoomiyihii hpre ee Balcad, Cusmaan Xaadoole oo isagoo ku sugan meel ka baxsan Balcad la hadlay BBC ayaa sheegay in si aan sharci aheyn sida uu yiri lagu soo weeraray degmada Balcad.
“Aniga wasiir ilama soo hadlin agaasimana ma arag haddii xilka la iga qaaday idaacadaha ayaa laga sheegi lahaa, warqadna la iima keenin, xagee xilka la iiga qaaday”ayuu ku dooday Xaadoole oo saaka la hadlay BBC.
Xaadoole ayaa dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu ku eedeeyay inay dagaal kusoo qaaday degmada Balcad, wxuuna sheegay in degmada ay soo weerareen gaadiid ay wateen ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM, sidaasna uu magaalada uga baxay.
Xaadoole ayaa sidoo kale ka hadlay weerar maleeshiyo isaga taabacsan ku qaaday boolis marayey Balcad oo kusii jeeday Jowhar, halkaasoo khasaare ka dhashay, islamarkaana booliska looga qaatay qaar ka mid ah gaadiidkii ay wateen.
“Dagaalkaas wuxuu ahaa mid si kama’a ku dhacay ilaa iyo hada cid wax naga soo weydiisay ma jirto inay boolis ahaayeen iyo in kale, anagoo sababtaas garan la’ ayaa hadana waxaa dhacday in 50 baabuur ciidamada AMISOM ka mid ay gurigeyga igu soo weeraraan” ayuu sidoo kale yiri Xaadoole.
Xaadoole ayaa sheegay inuu haatan ku sugan yahay deegaan u muuqda degmada Balcad, wuxuuna yiri “Hadda waxaa ku suganahay meel aan Balcad ka fogeyn”.
Gudoomiyahan hore oo ay ku raadjogaan ciidamada booliska iyo kuwa nabadsugidda ayaa madaxweynaha Soomaaliya ku eedeeyey inuu diidanyahay Federaalka sida uu hadalka u dhigay, wuxuuna xusay in weerarka lagu qaaday Balcad ahaa mid la doonayey in isaga lagu dilo.
“Anaga ma sugeyn in meesha nalagu dilo, waxaa rabnay in doorasho dhacdo dalka waa federaal, Madaxweynaha waxaa muuqata inuu diidan yahay Federaalka”ayuu ku dooday Xaadoole.
Maalintii Jimcaha ayaa maleeshiyo taabacsan Xaadoole waxey weerareen ciidamo boolis ah oo kusii jeeday xarrunta gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jowhar, waxaana shalay oo sabti ah halkaas weerar ku qaaday ciidamada dowladda Soomaaliya si ay usoo qabtaan Xaadoole, hase ahaatee ilaa hadda lama soo qaban.
Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland oo markale ku wadahadlaya Turkiga